Custom PB2000A-PB6000A Rivotra fanodinana rivotra masinina manamboatra milina mpamokatra sy mpamatsy | Dongshen
PB2000A-PB6000A Milina fanamafisam-peo milina fanenomana
Ny milina fantsom-pifandraisana EPS dia ampiasaina hanamboarana sakana EPS, avy eo hokapaina ho takelaka hanaovana insulment na fonosana ao an-trano. Vokatra malaza vita amin'ny takelaka EPS dia takelaka sandwich EPS, panneaux 3D, panneaux insulation rindrina anatiny sy ivelany, fonosana fitaratra, fanaka fanaka sns.
Ny milina famolavolana fanamafisana EPS Air dia mety amin'ny fangatahana fahaiza-manao kely sy ny famokarana sakana ambany, ny masinina EPS ara-toekarena. Miaraka amin'ny teknolojia manokana, ny milina fanamafisam-peo ataontsika izay afaka manamboatra sakana 4g / l, mahitsy ary tsara kalitao.
Ny milina dia mameno amin'ny vatana lehibe, boaty fanaraha-maso, blower, rafitra fandanjana sns.
1. Ny masinina dia mandray ny efijery Mitsubishi PLC sy Winview ho an'ny fanokafana bobongolo mandeha ho azy, fanidiana ny bobongolo, famenoana materialy, fimamoana, fitazonana ny mari-pana, fampangatsiahana rivotra, fampivoarana ary famoahana.
2. Ny takelaka enina rehetra ao amin'ny masinina dia amin'ny alàlan'ny fitsaboana hafanana mba hamoahana ny adin-tsaina, ka tsy afaka miova ny tontonana amin'ny hafanana ambony;
3. Ny lavaka bobongolo dia vita amin'ny takelaka alimina alimika manokana miaraka amina fantsona hafanana haingam-pandeha, 5mm ny hatevin'ny lovia vita amin'ny aluminium, miaraka amina fonosana Teflon mba ho mora demoulding.
4. Ny masinina dia nanangana tsindry faneriterena avo lenta ho an'ny fitaovana suction. Ny fampangatsiahana dia atao amin'ny alàlan'ny rivotra convection amin'ny alàlan'ny blower.
5. Ny takelaka vita amin'ny masinina dia avy amin'ny mombamomba ny vy avo lenta, amin'ny alàlan'ny fitsaboana hafanana, matanjaka ary tsy misy fiovana.
6. fehezin'ny paompy hydraulic ny fivoahana ny eran-tany, ka manosika sy miverina hafainganana hafainganam-pandeha daholo ny ejectors
Teo aloha: SPB2000A-SPB6000A EPS azo ovaina milina fanitsiana karazana Block
Manaraka: PB2000V-PB6000V Vacuum karazana fanamboarana milina